जीबन शैली – Ekathmandunepal
अहिले फेरी लाईभ आएर अर्चना पनेरुले गरिन यस्तो,आफ्नो पुरा कपडा खोल्दै … गोप्य अंग .. भिडियो उमेर पुगेकाले मात्र हेर्नुस
७ चैत्र २०७४, बुधबार २२:३९ ekathmandu Nepal 0
अहिले फेरी लाईभ आएर अर्चना पनेरुले गरिन यस्तो,आफ्नो पुरा कपडा खोल्दै … गोप्य अंग .. भिडियो उमेर पुगेकाले मात्र हेर्नुस काठमाडौं । नग्न तस्वीर सार्वजनिक गरेर पोर्नस्टारको अभ्यास गर्ने एक युवतीले पोर्न फिल्म बनाएरै छाड्ने […]
७ चैत्र २०७४, बुधबार २२:०२ ekathmandu Nepal 0
तामाङ फिल्म बाजीमेला मा समेत अभिनय गरेकी छिन् । उनलाई नेपालको एक चर्चित लोकदोहोरी नायिकाका रूपमा लिइन्छ । उनले थुप्रै लोकदोहोरी गीतको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरि छोटो समयमा नै आफूलाई चर्चित बनाउन सफल भएकी छिन् […]
७ चैत्र २०७४, बुधबार १९:१५ ekathmandu Nepal 0
काठमाडौँ — कुमार बस्नेतको एउटा चर्चित गीत छ– ‘छोरीभन्दा आमा तरुनी…’ । बलिउड अभिनेता आमिर खान र उनका छोरा जुनैदको सन्दर्भमा यही गीत फिट हुन्छ ।आमिर आफूलाई फिट राखेकै कारण तन्नेरी देखिन्छन्, उनका छोरा भने आमिरभन्दा जेठो । […]
जानि राख्नुस : यी हुन महिलाका सबैभन्दा संवेदनशील ९ अंगहरु
४ चैत्र २०७४, आईतवार २०:०७ ekathmandu Nepal 0
१ कम्मर: महिलाको कम्मर पुरुषको सबैभन्दा आँखा पर्ने स्थान हो । पातलो कम्मर हुने महिलाको सुन्दरताबारे सदियौं देखि चर्चा हुँदै आएको छ । बारुली कम्मर चलाउँदा पुरुष र महिला दुवैले रोमान्चित अनुभव गर्छन् । २ […]
किन अाफ्नै गाेत्रभित्रका व्यक्त्तिसँग विवाह गर्नुहुँदैन ?
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १८:४५ ekathmandu Nepal 0
हिन्दू धर्मको सोह्र संस्कारमध्ये एक विवाह पनि हो । विवाहले वरवधू मात्र नभई दुई परिवारबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । हिन्दू धर्ममा एकै गोत्रमा विवाह गर्न नहुने मान्यता छ । आजकल यो परम्पराको पालन मानिसले गर्दैनन् […]
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १४:०२ ekathmandu Nepal 0
हरेक मानिसको स्वभाव र रुची फरक फरक हुन्छ । मानिसले आफ्नो रुची अनुसार व्यवहार पनि भिन्न खालको देखाइरहेको हुन्छ । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कुनै व्यक्ति गुलियोको पारखी हुन्छन् भने कोही […]
८ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ११:५१ ekathmandu Nepal 0
एजेन्सी । महिलाको सुन्दरतामा मात्र होइन समुन्द्र शास्त्रमा पनि निक्कै महत्व छ नाइटो अर्थात नाभीको । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार मानिसको बोली चाली र ब्यबहारबाट समेत थाहा नपाएको कुरा नाभीबाट थाहा हुन्छ । कसरी थाहा पाउने […]
पोर्न स्टार बन्छु भन्ने अर्चना पनेरूले अमेरिकी नागरिकसँग बिहे गरेकै हुन् त ?
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार २०:३२ ekathmandu Nepal 0
काठमाडौं । पोर्नस्टार बन्छु भन्र्दै केही वर्ष अघि चर्चामा आएकी अर्चना पनेरू विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् । अर्चनाले पोर्नस्टार बन्न चाहेको अभिव्यत्ति दिएपछि उनले केही फिल्ममा पनि काम गरेकी छन् । पोर्न स्टार नबने पनि […]
६ फाल्गुन २०७४, आईतवार १४:५१ ekathmandu Nepal 0
भारतले सिमाना मिच्दा केही नबोल्ने नेपाली सेनाको काम छैन, खारेज गरिदिए हुन्छ । कालापानीमा १९६२ देखि निरन्तर भारतीय सेना बसिरहेको छ । तै पनि नेपाली सेनाले केही गर्न सकिरहेको छैन । भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट हटाउनको […]
अमेरिकामा छन् यस्ता यी २५ संस्कार जुन नेपालमा ठिक उल्टो अर्थ लगाउछन्
२९ माघ २०७४, सोमबार ११:५५ ekathmandunepal 0
पूर्विय संस्कार,संकृती र समाजमा हुर्केबढेका हामी नेपालीलाई कतिपय पश्चिमी संस्कार, परम्परा र सोच बिपरित जस्तो लाग्दो रहेछ । खासगरी अमेरिकाको एक दशक लामो बसाइको क्रममा देखेका, भोगेका र जानेका केही सामान्य भन्दा सामान्य प्रचलन, मान्यता […]